မာကု Rutte နှင့် Thierry Baudet အကြားဆွေးနွေးငြင်းခုံသင်မဲပေးမပေးသင့်ကြောင်းအထောက်အထား: မာတင် Vrijland
မာကု Rutte နှင့် Thierry Baudet အကြားဆွေးနွေးငြင်းခုံသင်မဲပေးမပေးသင့်ကြောင်းအထောက်အထား
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	မေလ 23 2019 အပေါ်	•6မှတ်ချက်
အမ်စတာဒမ်အတွက်အနီရောင်ဦးထုပ်အတွက် Jeroen Pauw အားဖြင့် ညှိနှိုင်းသရုပ်ဆောင်အပိုင်းအစ မာကု Rutte နှင့် Thierry Baudet အကြား (ဒါ့အပြင်ဆွေးနွေးငြင်းခုံဟုချေါ), ငါ့အဘို့ကျနော်တို့ထိပ်တန်းသရုပ်ဆောင်များနှင့်အတူဆက်ဆံသောအကြီးအသက်သေဖြစ်ခဲ့သည်။ သငျသညျပညာရှင်ပီသစွာမျက်စိပိတ်ဆို့ထိပ်တန်းသရုပ်ဆောင်များ။ အငြင်းအခုန်ငါတို့သည်သင်တို့ကိုမဲပေးသောသူမရှိကိစ္စနှစ်ခုလုံးကိုအသကျရှငျသက်သေပြပေးခဲ့တယ်သူနှစ်ဦးကိုကောင်းစွာလေ့ကျင့်သင်ကြားတွင်လည်းကိုမွငျလြှငျ, ဒါပေမယ့်သင်စင်းကိုအမြဲအတူတူဦးတည်ရွက်လွှင့်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာတူညီတဲ့စင်းကိုသာသင်္ဘောကိုတစ်ဦး၏ခတင်ပို့ရန်ရွှေ့စေနိုင်သည်။ အဆိုပါ FVD သင်္ဘောပုံ VVD သင်္ဘောထက်လုံးဝသစ်ကိုဦးတည်ချက်ရွက်လွှင့်ချင်ပေလိမ့်မည်ပုံရသည်, ဒါပေမယ့်သူ့ကွန်ရွက်ထဲသို့သင်ဆွဲဆောင်ဖို့ Thierry Baudet ကိုနှိုးဆှသင့်ကြောင်းသာထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်တော်မူ၏ ငါကဒီမှာ site ပေါ်တွင်ဤမျှလောက်များစွာသောဆွေးနွေးတင်ပြကြပြီလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်ကို။
အသိပညာတန်ခိုးတော်ဖြစ်၏, နှင့်အချိန်ကတည်းကရှေးပဝေဖနျဒတျချြအစိုးရ၏မူဝါဒနှင့်အတူလုံးဝနယ်သာလန်နိုင်ငံစိတ်ဓါတ်များ၏ကြီးမားသောအောက်ရေစီးနေထိုင်ပါတယ်။ အလွယ်တကူသင်သည်ရေဒီယို, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်သတင်းစာတွေပေါ်သတင်းလွှမ်းခြုံ directing ဝါဒဖြန့်အမြင်သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလုပ်နေတာဘယ်လောက်အကဲဖြတ်ရန်နိုင်သည့်ကြီးမားသော data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ; အုပ်စုငယ်များဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ သို့ဖြစ်. သင့်ကိုအစဉ်အုပ်စုတစ်ခုစကားပြန်ရှိသည်သေချာသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါလူသတ်မှုကိုတကယ် "နည်းပါးလာ Moroccan" ပင်မဟုတ်ပါတကယ်သော်လည်းတူသောအစွန်းရောက်ထုတ်ပြန်ချက်များအားမိမိပါတီစတင်များနှင့်ချိတ်ဆက် Pim က Fortuyn နှင့် Geert တောအရပ်အားဖြင့်ကူညီပေးခဲ့သည်မရှိသေးပေ။ ဒါဟာအစကျယ်ပြန့်ဥရောပဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
လုံခြုံရေးပိုက်ကွန်ကိုမဟာဗျူဟာအလုပ်ဖြစ်တယ်နှင့်မည်သို့လူနှစ်ယောက်လျှို့ဝှက်စွာတစ်စင်းကိုမာစတာ၏အလံပျံသန်းပုံကိုမာကု Rutte နှင့် တွဲဖက်. မနေ့ကအဖြစ် Thierry Baudet ။ အဘယ်ကြောင့်သေးလည်းနှစ်ဦးစလုံးကယ့်ကိုများနှင့်ကျိန်းသေရွေးကောက်ပွဲ၌ကိုသွားဖို့အတွက်ဆွေးနွေးငြင်းခုံရဲ့အဆုံးမှာခေါ်ဆိုပါ။ ထိုကဲ့သို့သောဆွေးနွေးငြင်းခုံရညျအသှေးသရုပ်ဆောင်ထက်ပိုပြီးအချည်းနှီးဖြစ်၏။ သငျသညျနီးပါးသရုပ်ဆောင်များကိုသူတို့ share နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အမြတ်အစွန်းနှင့် verliespunten စေနိုင်ပါတယ်မှုတ်အတိအကျအရာကိုသိ, အမေရိကန်တီဗီကနေကျနော်တို့သိနပန်းပွဲကနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအမြတ်အစွန်းနှင့်ရမှတ်ကိုကြိုတင်သဘောတူညီခဲ့သည့်အတွက်သရုပ်ဆောင်လျက်ရှိ၏ ပေမယ့်ဆွေးနွေးပုံကောက်ကာငင်ကာနဲ့တောက်ပပုံရသည်နှင့်အလျောက်ငါတို့၌ပြုခံရဖို့ကျန်းမာသန်စွမ်းဒဏ်ချက်ရှိပါတယ်။
သူတို့မဲပေးရသောပါတီသူတို့အစိုးရများကတစ်နှစ်အကြာတွင်တစ်နှစ်လိမ်များသိသောလူများ,, ၏ကြီးမားသောအောက်ရေစီးဥရောပကျယ်ပြန့်စိုက်ပျိုးမှုသည်။ ဒီတော့အတူတူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ချင်, သင်သည်ထိုအုပ်စုတစ်စုကိုဖမ်းယူဖို့စီမံကြပါပြီ။ ငါကဒီမှာလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်ကိုမဟာဗျူဟာဖော်ပြထားခြင်း။ ဒါကြောင့်သင်ကလက်ရှိဆန့်ကျင်ရေကူးဖို့စီစဉ်တဲ့သူငါးများအတွက်ငါးစာသတ္တုများပုံသွန်းသင်္ဘောတပ်မှူးနှင့်အတူသင်္ဘောလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ကိုအလွန်အကျွံထောက်ခံသူများရရှိမှုတစ်ခုခုကိုကိုယ်စားပြုထားတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် (သရုပ်ဆောင်) အဖြစ်, အုပ်စုအားနည်းအချို့န့ကြားဖြတ်အစိုးရဗုံးကိုသက်ဝင်။ ကျယ်ပြန့်ပေမယ့်ယခုဥရောပ (နှင့်အမေရိကန်) လျှောက်လုံးမဟာဗျူဟာအတူတူပါပဲ: သင်ပထမဦးဆုံးအုပျစုသိသိသာသာကြီးထွားပါစေ, သူတို့ကအမျိုးသားရေးဝါဒီမှ stigmatize, ကာကွယ်ရေး, ဝေဖန်သူများက (ထိုအမည်းစက်နှင့်အတူ ပူးပေါင်းကြံစည်မှုစဉ်းစားတွေးခေါ်), ပြီးတော့ညာဘက်။ သို့ပြုလျှင်သင်၏စာအုပ်တွေကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုရရှိကြကုန်အံ့, ဒါကြောင့်သူတို့ကထု၏အတော်လေးအာရုံစိုက်မှုကိုရ။ ထိုအခါစီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးပျက်ကွက်အဘို့ထိုသူတို့နောက်ဆုံးမှာတာဝန်ယူရနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် 1x ဝေဖန်မှုများ၌သင်တို့၏စကေးချတွက်ချက်ခြင်းနှင့်လမ်းကြောင်းမှန်နှင့်အာဏာများဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု၏သာ 1 ရှိကွောငျးထုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်ပါတယ်။
ထိုကြောင့်ငါတို့သည်သူတို့အမည်းစက်နှင့်ဆက်စပ်သမျှသောသူတို့အားနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုကြည့်။ ဤရွေ့ကားအမည်းစက် (မီဒီယာထုတ်ပြန်ချက်များတဆင့်) အသိအမြင် created နှင့်နောက်ဆုံးညဥ့်ကျနော်တို့ Thierry Baudet အပေါ်တံဆိပ်ခေါင်းများ paste လုပ်လိုက်ပါအဖြစ်ဘယ်လိုကောင်းတဲ့, Mark Rutte ကိုမြင်လျှင်နေကြသည်။ တကယ်တော့အဲဒီသင်တို့အပေါ်မှာတံဆိပ်ခေါင်းများသည်မဲဆန္ဒရှင်, ဖမ်းဖြစ်ကြသည်။ ဒါကအတိအကျမှတ်ပါပဲ။ သင်တစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်မှတာဝန်ပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။ မီးမောင်းထိုးပြ Get ။ သင့်ရဲ့စိတ်ကူးများမီဒီယာကနေတဆင့်ပြီးကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအမှတ်အသားမှာဖောင်းပွနိုင်ငံရေးကိုတဆင့်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ အဲဒီအမှတ်တံဆိပ် misogynistic, ညာဖြစ်တယ်, Anti-အီးယူ (သို့မဟုတ်အမျိုးသားရေး), တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းခြံစည်းရိုး (နယ်စပ်ပိတ်လိုက်), Anti-Islam မှာကိုယ်ပိုင်, ကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးနှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကုန်သွယ်ရေးအကျိုးစီးပွားပထမဦးဆုံးပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီအတွက်ရာသီဥတု hoax ယုံကြည်သူများနှင့်ယုံကြည်သူ (ဥပမာအဖြစ် သမိုင်း၏မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု၏လယ်ပြင်) ။ ဒါဟာယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းသည်နှင့်ဂျီဘရောလ်ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဆန္ဒခံယူပွဲ, Nexit, Frexit (etc) အုပ်စုတစ်စုဥရောပတစ်လျှောက်လုံးကိုထောက်ခံသူတွေရရှိစေနိုင်သည်။
အဆိုပါအူခံစားချက်တွေကိုကြီးမားသောအုပျစုထဲမှာရိုးရှင်းစွာအသက်ရှင်နေထိုင်နောက်ပိုင်းတွင်ထို့ကွောငျ့ဒီအမှတ်တံဆိပ်နဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းစိတ်ဓါတ်များမှစကေးအလျောက်ငါတို့၌ပြုရပါမည်။ သင်ပထမဦးဆုံးထောက်ခံသူများကြီးထွားရာတစ်ခုတည်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့်သင့်အုပ်စုအရာအားလုံးကိုချိတ်ဆက်နိုင်လျှင်, သင်နောက်ဆုံးတွင် built ဗုံးများနှင့်သင်္ဘောနစ်မြုပ်ကိုသက်ဝင်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည် (ဥရောပနှင့်အမေရိကန်တစ်လွှားအတူတူအမှတ်တံဆိပ်ခံသော) သင်္ဘောများဘေးကင်းလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်ကို၏တပြင်လုံးကိုသင်္ဘောပျက်နိုင်ပါတယ်။
အသစ်ကကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ကြားဖြတ်အစိုးရရောဂါကူးစက်ပြီးသားဖြစ်ပေါ်နိုင်အောင်သင်, အတော်ကြာအရှုပ်တော်ပုံများအတွက်ပြီးသားအဲဒီမှာကဒီမှာပါစေနှင့်။ ထိုသူအပေါင်းတို့ကအမျိုးမျိုးကနိုင်ငံရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်ပေမယ့်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေး, အုပ်ချုပ်ရေးရမ်းကားမှု, misogyny etcetera ၏အမည်းစက်လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင်သို့သော်ရည်ရွယ်ချက်ကိုအဓိကစီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးပျက်ကွက်မှုအတွက်အုပ်စု (သစ်ကိုအမှတ်တံဆိပ်) ကိုအားသွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆုံးရန်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ဂျီဘရောလ်ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဆန္ဒခံယူပွဲဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဒါကလည်းယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ဂျီဘရောလ်ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဆန္ဒခံယူပွဲဆန္ဒခံယူပွဲအီးယူမထွက်ခွာမီအနိုင်ရနိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သောသူအပေါင်းတို့သည်ဗြိတိန်နိုင်ငံရေးသမားများ (သရုပ်ဆောင်များကို) နှင့် တွဲဖက်. အဘယ်ကြောင့်ဗြိတိန်နှင့်ဂျီဘရောလ်ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဆန္ဒခံယူပွဲဖြစ်စဉ်ကို Theresa မေလသည်နှင့်ကျရှုံးပါစေရန်လိုအပ်ပေမည်။ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ဂျီဘရောလ်ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဆန္ဒခံယူပွဲဟာပြီးသားအကြီးစားလက်ျာဘက်အုပ်စုသည် (စိတ်ကူးများအမျိုးမျိုးတို့ကိုချိတ်ဆက်နိုင်သစ်ကိုအမှတ်တံဆိပ်) ကိုလှည့်ဖို့နောက်ဆုံးတော့လည်ပင်းမှတ်သားထက်နံပါတ်များနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအမျိုးမျိုးတို့ကိုထဲမှာသင့်ပါတယ်။ ကျန်ကြွင်းသောအဟောင်းများကိုရေတပ်သင်္ဘောတင်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လုံခြုံရေးပိုက်ကွန်ကို, (အသစ်စက်စက်၏တစ်ခုလုံးကိုဘေးကင်းလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်ကိုစင်းကို) နစ်မြုပ်သင်္ဘောကိုသငျ့သညျ။ အာဏာဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုဆီသို့ဦးတည်ကြင်သင်ပြန်မောင်းသောအသက်ကြီးစင်းကို။
အဆိုပါရွေးကောက်ပွဲကိုသွားနှင့်အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်စနစ်အားနည်းစေခြင်းမရှိတော့သဖြင့်နိုင်ငံရေးသရုပ်ဆောင်များကိုဖော်ထုတ်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Thierry Baudet ကြီးစွာသောအောက်ရေစီးဖို့အယူခံကြောင်းကိုယ်စားပြုဖို့သာဘေးကင်းလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်ကိုမဟာဗျူဟာအသံသည် (ထိုအမှတ်တံဆိပ်) ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာတဦးတည်းကအသကျရှငျကြောင်းကိုသိတယ်သောစိတ်ဓါတ်များဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အမှတ်အသားနောက်ပိုင်းတွင်အပေါငျးတို့သပြဿနာများအတွက်အပြစ်တင်ခြင်းနှင့်နစ်မြုပ်ညာဘက်နိုင်ပါတယ်စေနှင့်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူထပ်တူညီတဲ့အဟောင်းစင်းကို၏သင်္ဘောများပေါ်တွင်ရေးဆွဲစေခြင်းငှါနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မှတ်သားထားရမည်အဘယျသို့ ဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ကကဲ့ရဲ့ကြသည်သို့မဟုတ်ထွက်ကြပြီးအစဉ်အဆက်ကိုထပ်ဝေဖန်ဖို့သူတို့ရဲ့စိတ်အထဲကပါစေပါလိမ့်မယ်။
သင်အမှန်တကယ်အမှုအရာကိုပြောင်းချင်ကြဘူး, သင်အမြဲတမ်းနိုင်ငံရေးမှာသင့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကို cancel ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါပြောင်းလဲမှုကိုသင်ဖမ်းယူဖို့လိုအပ် (စာသားသရုပ်ဆောင်များကို) အဆိုတော်မဲပေးဆက်လက်မထားဘူး။ အဆိုပါပြောင်းလဲမှုကိုသင်ချတဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့အလုပ်မရှိတော့သူတို့ရဲ့ရဲတိုက်ထဲကနေကတ္တရာစေးနဲ့အမွေး Hunt နှင့်အတူရွေးကောက်ပွဲနှင့်မီဒီယာများနှင့်နိုင်ငံရေး၏အမြင်မန်နေဂျာကိုတိုင်တန်းလာပါတယ်။ သူတို့ကလာမယ့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်ကို quarterback မှာပြဿနာများနှင့်မဲများ၏အကြောင်းရင်းနောက်တဖန်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်မပေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်, အပေါ်ကပြောင်းလဲမှုကိုမျှော်လင့်သင့်ပါဘူး။ ကိုယ်ကသာယူဘေးကင်းလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်ကိုမှသင်္ဘောနစ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျ action ကိုသူ့ဟာသူယူရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအဖြစ်အစွန်းရောက်ပြောင်းလဲမှုနှင့်တော်လှန်ရေးအဘို့အချိန်ဖြစ်ပါသည် ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထား.
source link ကို entries တွေကို: npostrart.nl
ဒီမိုကရေစီိံဖိုရမ်မှာ Henk Otten ပျက်ယွင်း (FVD) ဒါကြောင့်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း
မာကု Rutte အကောင်းဆုံးဒတ်ခ်ျအနေဖြင့်ဆင်ဆာပိတ်ထားသောဝက်ဆိုက်များပေါ်မှစာတစ်စောင်
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တော်ဝင် Clingendael ၏ kajsa ollongren မှတဆင့် Thierry Baudet နှင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကဒ်စတင်
Tags:: အမ်စတာဒမ်, ဆွေးနွေးငြင်းခုံ, EU, ဥရောပ, အထူးပြုလုပ်ထားသော, FVD, ဉီးထုပ်, Jeroen, အမှတ်, ဉဒေါင်း, နီသော, Rutte, မဲပေး, Thierry Baudet, tv, ရွေးကောက်ပွဲတွေ, ရွေးကောက်ပွဲစကားစစ်ထိုးပွဲ, ဗီဒီယို, VVD
23 မှ 2019 မေလ 09: 47
လျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်အပေါင်းတို့နှင့်အထက် ... .well အပိုင်းအစ
23 မှ 2019 မေလ 10: 04
Rutte ရုံကျနော်တို့ကြောင့်ဒတ်ချ်ဘဏ်များ၏အီးယူအနေဖြင့်မဟုတ်ကပြောပါတယ်။ ဤတွင်အဖြေကိုသင်လူပေးသောအစိုးရရှိပါက, ထို့နောက်သင်ဘဏ်များ ယူ. up ပြုလုပ်ရုတ်သိမ်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကိုဂရိကလူလုပ်မပေးခဲ့ပါဘူးဂရိနိုင်ငံမှသွားဘဲ, ဗြိတိန်နှင့်ဂျာမန်ဘဏ်များ။ လူတွေကယခုအောက်သို့ငုံ့ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေသို့မဟုတ်အရေးမပါဘူးရိုးရှင်းတဲ့ရောဂါများသေဆုံးရှိကြ၏။ ဒါကြောင့်ပြည်နယ်စဉ်တစ်နှစ်လျှင်လုပ် ABN AMRO နှစ်ခုဘီလီယံခန့်အမြတ်အစွန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြောမပေးပါ။ ဒတ်ခ်ျတွင်လူဦးရေရိုးရိုးကိုနှစ်စဉ်နှစ်ဘီလီယံဝင်ငွေနိုင်နေချိန်တွင်ဤဘဏ်အများကြီးလျော့နည်းရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါခေါ်ခေါင်းဆောင်များသူတို့ကစနစ်ထိုင်ထို့နောက်ဘဏ္ဍာရေးစနစ်နှင့်ကြွေးမြီသဘောတူညီချက်၏ကျွန်ကွင်းဆက်ကို reset ပါဘူးအဖြစ်။
အနောက်နိုင်ငံတွေ၏အများစုမှာအနည်းဆုံး3ပူလေကြောင်းငှါးပါပြီသောဘဏ်များအဘို့အတစ်ပတ်ကိုရက်ပေါင်းအလုပ်လုပ်။ ဒါဟာမိခင်အရာအားလုံးများအတွက်ပေးဆောင်ခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့အမျိုးသမီးတစ်ဦးရှိသည်ဖို့လည်းနည်းနည်းပိုက်ဆံနေဆဲဖြစ်သည်။ အစိုးရနှင့်ကောင်းစွာအမြိုးသားအမှန်ကန်စွာ Daddy ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ Hard-အလုပ်လုပ်သည်ဘိုးဘေးတို့နှင့်မိခင်များမိခင်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းငှါလာကြတရားမျှတဖြစ်ပါတယ်။
အကြင်သူသည်မြင်ကွင်းတစ်ခုသူမကကျွန်ကွင်းဆက်လိုက်နာမှ allemaal.de တာဝနျရှိပုံပေါ်ပါတယ်။
23 မှ 2019 မေလ 10: 12
နှင့်သင်တန်း၏ဤ: "သင်မဲပေးကြဘူးလျှင်, သင်တိုင်ကြားလို့မရပါဘူး!"
ဆန့်ကျင်ဘက်မှန်: သင်မဲပေးလျှင်သင်တိုင်ကြားလို့မရဘူး, ထို့နောက်သင်သည်လှည့်ဖြားခြင်းနှင့်မတရားမိစ္ဆာဒီမိုကရေစီတရားဝင်မှုပေးပွီ။ တစ်ခုခုမိစ္ဆာစနစ် (ပဲဒီမိုကရေစီဟန်ဆောင်အာဏာကိုယ်နှိုက်ရွေးချယ်ထားသည့် pawn အားဖြင့်တည်ရှိမယ့် Pseudo-ဒီမိုကရေစီ) ပထမဦးဆုံးအရိုးမှပြိုပျက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်တရားဝင်မှုပေးနှင့်တစ်ခုလုံးကိုစနစ်ကလေဖြတ်အောင်လုပ်ရန်မပေးသင့်ပါတယ်။
23 မှ 2019 မေလ 10: 37
ဒီတော့ Rutte လည်းမရဏာနိုင်ငံနှင့်အကောင်းကင်ဘုံအကြားဝါဒဖြန့်တစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းသည့်အခါသူ / ရဖတ်ကိုရွေးပါ "!!! ရမယ်" သူကဟာသမဟုတ်ဘူး, ကခါးသောအမှန်တရား
23 မှ 2019 မေလ 22: 13
ဟုတ်ကဲ့, သင်တန်း, အလုပ်သမားပါတီတစ်ချိန်ကဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဘယ်လို ... hahaha အနိုင်ရရှိ?
27 မှ 2019 မေလ 09: 29
ကို "ညာဘက်" စင်းကို၏နစ်မြုပ်စတင်နေပြီ:
မဲဆုံးရှုံးမှု, "သာ (subliminal '' မြိတ် '' များအတွက်) မြို့ကြီးများတွင်အနား, ဒီမှာတွေ့မြင်:
« မီဒီယာတစ်ဦးအရှုပ်တော်ပုံ Give, ယဇျပူဇျော (Harbers) ပြည်နယ်: ယုံကြည်ကိုးစားမှုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး
Wilson က Boldewijn နှင့်အတူ Telegraaf.nl အပေါ်မာတင် Vrijland နှင့်အတူတိုက်ရိုက်အင်တာဗျူး (ဗီဒီယို) »
ကင်မရာ2op ကလေးများအပေါ်ဖိအားပေးမှုသည်အလွန်ကြီးမားသည်။
Zonnetje op နိုင်ငံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်လည်ပညာသင်ကြားရေးစခန်းများတည်ဆောက်ရန်အဆိုတင်သွင်းသည်။
မာတင် Vrijland op ကုလသမဂ္ဂ၏အစီအစဉ် 2030 ကိုနားလည်ရန်သမိုင်းကိုသိထားပါ